Uncategorized Archives - Uptodate MM
အကြွေးနဲ့ထီရောင်းပေးတဲ့ထီသည်ကြီးရဲ့ အိမ်ပြန်ခရီးကို ပျော်ရွှင်စရာတွေနဲ့ ဖန်တီးပေးလိုက်တဲ့ အဘွားဒေါ်ခင်တင့်ရဲ့ စေတနာ လေးစားစရာပါ….
By Uptodate MMPosted on July 11, 2019
အကြွေးနဲ့ထီရောင်းပေးတဲ့ထီသည်ကြီးကို ကားအသစ်တစ်စီးပြန်ဝယ်ပေးလိုက်တဲ့ အဘွားဒေါ်ခင်တင့်ရဲ့ စေတနာ လေးစားစရာပါ…. 11.7.2019တဦး​မေတ္တာနဲ့တဦး​စေတနာပါပဲသိန်း(၁၅၀၀၀)ကံထူးရှင် အဖွားဒေါ်ခင်တင့်မှ ရွှေထီး ထီအရောင်းကိုယ်စားလှယ်ဦးစောဝင်းအား ကားတစီးလွှဲပြောင်း ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်​ အဖွားက ဒေါ်ခင်တင့်၊ အသက်(၈၀)ပါ။ သားသမီး (၅)ယောက်ရှိပြီး တစ်ယောက်ဆုံးသွားပြီ ဖြစ်လို့ လက်ရှိ သားသမီး(၄)ယောက်ရှိတယ် […]
၁၅၀ သိမ်ဖြူလမ်း က ၁၂ထပ်တိုက်ကပ်ရက်ခြံမှာဆောက်တော့ ဘေးအိမ်ရဲ့ အဖြစ်အပျက် အခြေအနေတဲ့
By Uptodate MMPosted on May 15, 2019
United Construction နှင့် ရန်ကုန်စည်ပင်(ယာ/အုံ)/ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ်စည်ပင်တို့ ပူးပေါင်းလာဒ်စားပြီး ပြည်သူများအားဒုက္ခရောက်စေရန် အသက်အန္တရာယ်ရှိစေရန် ဆောင်ရွက်နေမှု ခုမြင်ရတာကျနော့ အသက်၇၀ကျော်၈၀ကျော်မိဘတွေနေထိုင်တဲ့ ၁၅၀သိမ်ဖြူလမ်း မြေညီထပ်တိုက်ခန်းပါ ဘေးကပ်လျက်တိုက်ကို United Construction က ၁၂ထပ်တိုက်ဆောက်ဖို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကစလုပ်ပါတယ် အဲဒီကုမ္ပဏီက ဘိုးပိုင်တွေကို ၁’ […]
မန္တလာမင်းခရီးသည်တင်ယာဉ်နှင့် အလုပ်သမားတင်ဆောင်လာသောယာဉ်တို့တိုက်မိရာ ၂ ဦးသေဆုံး
By Uptodate MMPosted on May 6, 2019 May 6, 2019
နေပြည်တော်၊ ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ်တွင် မန္တလာမင်းခရီးသည်တင် Express ကားနှင့် အလုပ်သမားများ တင်ဆောင်လာသောယာဉ်တို့ တိုက်မိရာမှ ၂ ဦးသေဆုံးသွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ နေပြည်တော်၊ ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ်၊ ဒက္ခိဏသီရိဈေးအနီးတွင် ယနေ့(မေလ ၆ ရက်)၊ နံနက် […]
အာကာသနှင့် ပတ်သက်ပြီး.. လာမယ့် ၂၀၁၉ ခုနှစ် မေလအတွင်းမှာ ထူးခြားမယ့် ဖြစ်စဉ်အချို့ကို အာကာသနှင့်စကြဝဠာ စာဖတ်ပရိတ်သတ်များအတွက် ရေးသားတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်..။ လက်ရှိ လဆန်းပိုင်းမှာ အထူးရေပန်းစား သတိပြုသင့်တာကတော့ စူပါ ဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းကြီး ဖာနီ (Fani) ဖြစ်ပါတယ်။ […]
၂၀၁၉ ခုနှစ် ယခု မေလ အတွက် ထူးခြားမည့် ဖြစ်စဉ်များ
By Uptodate MMPosted on April 30, 2019 April 30, 2019
၂၀၁၉ ခုနှစ် မေလအတွက် ထူးခြားမည့် ဖြစ်စဉ်များ အာကာသနှင့် ပတ်သက်ပြီး.. လာမယ့် ၂၀၁၉ ခုနှစ် မေလအတွင်းမှာ ထူးခြားမယ့် ဖြစ်စဉ်အချို့ကို အာကာသနှင့်စကြဝဠာ စာဖတ်ပရိတ်သတ်များအတွက် ရေးသားတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်..။ လက်ရှိ လဆန်းပိုင်းမှာ အထူးရေပန်းစား သတိပြုသင့်တာကတော့ […]
By Uptodate MMPosted on April 8, 2019
“-ခွင့်လွှတ်ပါအမေ” အဲဒီနေ့မနက်ကပေါ့အမေ သားလေ အိပ်ယာက အစောကြီးထ ထမင်းကြမ်းကို ရှုးရှဲလဖက်နဲ့ အားပါးတရ နယ်ဖတ်စားသောက်မျောထဲ အလုက်လုပ်ဖို့ ထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်။ အလုပ်လုပ်နေရင်းသားရဲ့ အတွေးထဲမှာရွာမှာကျန်ခဲ့တဲ့ အမေနဲ့ညီမလေးရှင်မပြုရသေးတဲ့ ညီလေး.. ရွာမှာ […]
မော်​​​​တော်​ပေါ်မှ ခုန်​ချ ခဲ့တဲ့ သားအမိနှစ်ဦး
By Uptodate MMPosted on March 30, 2019
မော်​​​​တော်​ပေါ်မှ မိခင်​တစ်​ဦး က​လေးငယ်​ကိုဖက်​၍ ခုန်​ချ ​ယနေ့ ၃နာရီ၃၈ မင်းကွန်းမှမန္တလေးအစုန်လမင်းသာမော်တော်ပေါ်မှမန္တလေးဆိပ်ကမ်းရေလယ်ခေါင်မှာကလေးငယ်ပွေ့လျက်ခုန်ချသည်…။ အချိန်မှီမော်တော်ပေါ်မှရေယာဉ်မောင်သူကလေးမှကယ်ဆယ်… ခုန်ချသူအမျိုးသမီးမှာမင်းကွန်းတောင်ရွာကဟုသိရသည် ….. မော်တော်ပေါ်ရောက်တော့သတိမရသဖြင့်ဘေးလူများငိုယို၍အော်ခေါ်သံများ…။ မော်တော်ခြင်းကပ်လျက်မန္တလေး ၃းနာရီအဆန်မော်တော်ပေါ်ကျမမြင်တွေ့လိုက်ရသည့်မြင်ကွင်းပါ…… လွတ်ရာလွတ်ကြောင်းသွားပြီးသေကြောင်းမကြံဘဲနဲ့….။ အံ့သြတယ် ကျမတူလေးမော်တော် ကလေးဒုက္ခဖြစ်တော့မလို့……အချိန်မှီကယ်လိုက်နှိုင်လို့…..။ Yin Yin Htun>>Min […]
By Uptodate MMPosted on March 27, 2019
မင်းရာဇာကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့တခဲနက်အားပေးမှုကိုရရှိနေတဲ့ စွယ်စုံရအနပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး နယ်ပရိသတ်တွေတခဲနက်အားပေးခဲ့ရတဲ့ အနပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူတွေ့ရဲ့ ဘဝကိုအဓိကပုံဖော်တဲ့ ဇာတ်ကားတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ရင်ထဲကိုရောက်ရှိလာတဲ့မင်းရာဇာကတော့ အနပညာလောကမှာ နာမည်တစ်လုံးနဲ့ ရပ်တည်နေနိုင်တဲ့ အနပညာရှင်တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ မင်းရာဇာကတော့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို ဇနီးချောလေးနဲ့အတူ တည်ဆောက်ထားနိုင်သူလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ မင်းရာဇာကတော့ ချစ်စရာကောင်းလွန်းလှတဲ့ […]
By Uptodate MMPosted on March 22, 2019
ပန်းနာရင်ကျပ် ရောဂါရှိသူများအတွက် တစ်သက်လုံးပျောက်ကင်းစေသော ဆေးနည်းကောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ မိတ္ထိလာမြို့မှ အဘိုးကြီးတစ်ဦး နှစ်နှစ်ကြာကြာ ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ ဖြစ်နေခဲ့ရာ လူပြောများ၍ ပဲစဉ်းငုံ အလုံးလိုက် တစ်နေ့ နို့ဆီဘူး တစ်လုံးကျ ပြုတ်၍ ဆားခတ်ပြီး အစမ်းသဘောဖြင့် နေ့စဉ်စားနေခဲ့ပါတယ် စားနေရင်း […]
ရန်ကုန်-ဒလ ကူးတို့သင်္ဘောပေါ်က သတိထားပြုပြင်စရာ ကိစ္စတခု
By Uptodate MMPosted on March 16, 2019
ရန်ကုန်-ဒလ ကူးတို့သင်္ဘောပေါ်က သတိထားပြုပြင်စရာ ကိစ္စတခု “ရေကြောင်း ပို့ဆောင်ရေး တာဝန်ရှိသူသို့” … မနေ့တုန်းက ရန်ကုန်-ဒလ ကူးတို့ သင်္ဘောစီးဖြစ်တယ်…။ မျက်စေ့ထဲအမြင်မတော်လို့post တစ်ခု့ရေးလိုက်ပါတယ်…။ တာဝန်ရှိ့သူတို့ ပညာရှိ သတိဖြစ်ခဲ ဆိုသလိုမဖြစ်ရအောင် ပြောဖြစ်တယ်…။ ဘယ်သူမှမသိသေးရင် […]